नेपाली बच्चाले गाएको ‘प्रभु यशू’को गीत इन्डियामा कसरी भयो एकाएक भाइरल ? – मिलिजुली खबर
नेपाली बच्चाले गाएको ‘प्रभु यशू’को गीत इन्डियामा कसरी भयो एकाएक भाइरल ?
२८ काठमाडौँः बलिउड अभिनेता अनुपम खेर सामाजिक सञ्जालमा राखेको एउटा गीत यतिबेला इन्डियामा निकै चर्चामा छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा बच्चाहरुसँग सम्बन्धित पोस्ट बेला बेला गरिरहन्छन् ।
अनुपमले हालै सडकमा गीत गाइरहेका तीन बच्चाले गीत गाएकाे एउटा भिडियो शेयर गरेका छन् । उक्त भिडियाेमा तीनै जनाले नेपाली भाषामा गीत गाएका छन् । ती बच्चाको समूहलाई अनुपमले ‘बेस्ट म्युजिक ब्याण्ड’ बताएका छन् र आफ्नो तर्फबाट अवार्ड पनि दिएका छन् ।
अनुपम खेरले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा शेयर गरेको भिडियोमा तीन बच्चाहरुलाई देख्न सकिन्छ । ती बच्चाहरु सडकमा उभिरहेका छन् । तीनजनाको बीचमा बसेको एक बच्चाले लौरो बोकेको छ र त्यसलाई नै गितारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै छेउका दुवै जना बच्चाहरु गीतमा मस्त छन् ।
यी बच्चाहरुले प्रभु यशूको गीत नेपाली भाषामा गाएका छन् । आफ्नै सुर, ताल अनि धुनमा निकै मस्तसँग ती बच्चाहरुले गीत गाइरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । तीन दिन अघि उनले शेयर गरेको भिडियो ४ लाख ६२ हजारभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
उनले ती बच्चाहरुको ठेगाना भने खुलाएका छैनन् ।
अनुपम खेरले भिडियो शेयर गर्दै हिन्दीमा लेखेका छन् – ‘प्रस्तुत है दुनिया का सबसे अद्भुत एवं धमाकेदार म्यूज़िक बैंड१ इन बच्चों का गाना हमें इस बात का यक़ीन दिलाना चाहता है कि दुनिया बुरी नहीं है।हम अच्छे वक़्त की और हालात के बेहतर होने की उम्मीद हमेशा कर सकते हैं। ज़िंदगी ख़ूबसूरत है और यहाँ कुछ भी हो सकता है !
शिक्षक संगठन बलेफीको अध्यक्षमा राजकुमार ढुङ्गना चयन
लिसंखु-पाखरमा एमाले एक ढिक्का !